Xigasho.net Faallo:- Faradhaqa Sanadka Cusub 2018 Oo La Kowsaday Dagaalka Siyaasadeed Ee Dowladda Iyo Mucaaradkeeda Oo Gacan Ka Hadal Isu Rogay - Xigasho.net
Faallo:- Faradhaqa Sanadka Cusub 2018 Oo La Kowsaday Dagaalka Siyaasadeed Ee Dowladda Iyo Mucaaradkeeda Oo Gacan Ka Hadal Isu Rogay
Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa u muuqda kuwa awood u yeeshay in ay ku dhex milmeen nidaamka dowliga ah isla markaasna ay ka dhex dagaalamayaan Hayadaha Sharci dejinta, Maxkamadaha, Warbaahinta iyo ciidamada Qaranka.
Dhinaca kale dowladda madaxweyne Farmaajo ayaa awooda saareysa in dagaalka kooxaha Mucaaradkiisa ay ku burburiyo waxqabad la taaban karo oo indhaha bulshadda soo jiita isla markaasna kaga horkeeno Mucaaradka la dagaalamaya.
Siyaasiyiinta Mucaaradka ayaa lagu dhaliilaa in ay soo dedejiyeen dagaalkooda siyaasadeed ee ay kaga soo horjeedaan dowladda cusub oo bilo kooban talada wadanka haysay, taasina ay fursad siisay Madaxweyne Farmaajo in la arki waayo khaladaadka ay Xukuumadiisu sida is daba jooga ah u geleyso.
Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur oo dhowaan gurigiis ay ciidamada dowladdu weerareen iyo siyaasiyiin kale oo Olog la ah ayaa noqday dagaalkii gacan ka hadalka ahaa ee ugu horeeyey ee dhex mara nidaamka Dowliga ah ee Soomaaliya iyo Ururka qarsoon ee Mucaaradka oo ay ku mideysan yihiin rag miisaan ku leh siyaasadda oo uu ka mid yahay Raysal Wasaarihii hore ee Soomaaliya Cumar C/rashiid.
Haseyeeshee, weerarkii loo geystay guriga Sanitor Cabdi Qaybdiid ayaa la filayaa in uu ahaa jawaabta ugu weyn ee Siyaasiyiinta Mucaaradku ku khalkhaliyeen Dowladda Farmaajo hogaaminayo.
Daah furka sanadka cusub ee 2018 ayaa ku bilowday Labada arrimood ee kala ah weerarkii Sanitor Cabdi Qaybdiid in la ogaado halka uu ka yimid iyo cidda masuulka ka aheyd, tan Labaadna waxaa noqoneysaa dacwada miiska saaran ee Siyaasiga C/raxmaan C/shakuur halka ay ku biyo shuban doonto.
Dhinaca kale, dadka siyaasadaha falanqeeya ayaa aaminsan in dagaalka Mucaaradku aysan ku wajahneyn Farmaajo oo keliya ee sida tooska ah uu dhex marayo Raysal Wasaare Kheyre iyo Agaasimaha Madaxtooyada Fahad Yaasiin oo isku dhinac ah iyo Siyaasiyiinta Mucaaradka ee beesha Habar Gidir u badan.
Ololaha Mucaaradka ayaa ah in ay dhufeyska ay ku jiraan Raysal Wasaare Kheyre iyo Fahad Yaasiin in kaga saaraan kadib marka ay jaahwareer siyaasadeysan ku ridaan siyaasadda dowladda Madaxweyne Farmaajo.
Madaxweyne Farmaajo ayaa inta badan iska indha tira weerarada aan qarsooneyn ee Mucaaradkiisu ku hayaan wuxuuna u arkaa Niman ku ciyaaraya dhinbilo ololalaya oo mar uun ay gacmaha kaga guban doonaan.
Arrintu siday doonto ha ahaatee, Siyaasadda Soomaaliya ee wakhtigan ayaa u muuqaal eg ciyaaraha goboladda Soomaaliya oo beelaha ay ka soo kala jeedaan ay taagerayaal ka yihiin.